Oovimba be-Ethereum-Funda ukurhweba
FUMANA IIMPAWU ZE-FOREX VIP
Ukutya kweendaba zeFX
Iindaba ze-EUR / USD
Imiqondiso ye-Forex yasimahla Amaqela eTelegram
IiAkhawunti ze-Forex ezixhaswe ngemali
Iiplatifti zorhwebo eziPhambili ze Forex
Ezona ziKhokelo ziBalaseleyo ze-Forex
Iakhawunti yeDemo ye-Forex
Ibhonasi ye Forex
UkuHlahla kwe Forex
IiAkhawunti ezincinci kunye neMicro
Iingcebiso zorhwebo nge Forex
Ulawulo lweAkhawunti ze-Forex
Ukulawulwa kweeAkhawunti zePAMM
Funda ukuba ungarhweba njani ngeCrypto
Funda indlela yokuThengisa iBitcoin
Amaqela eTelegram ye-Crypto yasimahla yasimahla
Ezona ziQonga ziRhwebo ziBalaseleyo zeCrypto
Thenga i-Bitcoin ngeKhadi letyala
Thenga iBitcoin ngeKhadi lokuTsala
Eyona Waltlet yemali ilungileyo
Funda ukuRhweba ngeForex
Iyini iMarike ye-Forex
Funda ukuRhweba iiStock
Funda kuRhwebo lwemihla ngemihla
Amashishini oSuku lokuShishino
Funda ukuThengisa ngexabiso ngeNtengiso
Zithini iiPips ze-Forex
Funda ukuThengisa urhwebo
Usebenzisa njani ubungakanani
Ulawula njani ukusasazeka kwakho
Indlela yoRhwebo loLusu
Uyenza njani into kwiStock Short
Uyisebenzisa kanjani iMargin xa uthengisa
Iiyure zeeNkcazo zeXesha
AmaQonga amaNtengiso aPhambili
Eyona miqondiso yeStock
Khuphela ngokuzenzekelayo iiRhwebo zethu eToro
Ezona nkqubo zintengiso ze Forex
Iiakhawunti zoRhwebo zase-UK
Ixabiso lesenzo sokurhweba ngePDF
Urhwebo lwexesha elizayo
Ukurhweba ngePenny Stock
Ngaba ukuThengiswa kweHalal Forex
Iiakhawunti zokuthengisa zamaSilamsi
Abarhwebi abagqwesileyo kwi-eToro
Abarhwebi be STP
Ama-Islamic Forex Brokers
Ixesha elizayo Abarhwebi
Abarhwebi abaGqwesileyo beASIC
Abarhwebi abaLungileyo beCFTC
Abarhwebi abaGqwesileyo beCySEC
Abarhwebi beFCA abagqwesileyo
Abarhwebi abaGqwesileyo beSEBI
Ixesha elide FX
Uphengululo lweeMakethe zeHlabathi
Funda iNkqubo yokuDibana neRhwebo
I-Ethereum iRhweba kwiNqanaba eliNcinciweyo njengeMfuno kunye noNikezo luFikelela kuLingano
Ukuhlaziywa: 19 January 2022
I-Ethereum ikwindlela esecaleni
I-altcoin ithengisa phakathi kwe-$ 3,000 kunye ne-3,400 yeedola
I-Ethereum ETH) Izibalo zaNgoku
Ixabiso langoku: $ 3,135.91
Intengo yeNtengiso: $ 369,959,674,234
Umthamo wokuThengisa: $ 13,876,892,629
Iindawo ezinkulu zokubonelela: $ 4,000, $ 4,500, $ 5,000
Iindawo ezifuna kakhulu: $ 3,500, $ 3,000, $ 2,500
Uhlalutyo lwamaxabiso e-Ethereum (ETH) ngoJanuwari 19, 2022
Ixabiso le-Ethereum (ETH) ikwihambo ebopheleleke kuluhlu njengoko imfuno kunye nonikezelo lufikelela kwi-equilibrium. Ukususela kwi-8 kaJanuwari yokuhla kwexabiso, i-bearish trend iyancipha njengoko i-altcoin iphinde yaqala ukuhamba phakathi kwe-3,000 kunye ne-3,400 yeedola. Kwiveki ephelileyo, i-Ethereum ibirhweba kuluhlu oluvaliweyo. Ukususela ngo-16 kaJanuwari, i-altcoin iye yawa emva kokubuyisela ukuchasana kwi-3,400 yeedola. Namhlanje, i-Ether iwele phantsi kwe-3,049 yeedola kwaye ibuyela umva ukuze iqalise phezulu. Oku kube yisenzo sexabiso ukususela ngoJanuwari 8. Ukuqhawula okanye ukuchithwa kuya kukhansela ukunyakaza okuhambelana noluhlu.
I-ETH / i-USD - Itshati yemihla ngemihla
Iimpawu zezoBugcisa ze-ETH Ukufunda
I-Ether ikwinqanaba le-35 ye-Relative Strength Index kwixesha le-14. I-altcoin enkulu kunazo zonke isekho kwi-downtrend zone. I-SMA yeentsuku ze-21 kunye ne-50-day SMA zithambekele emazantsi zibonisa ukuhla. I-Ether ingaphezulu kwe-25% yoluhlu lwe-stochastic yemihla ngemihla. Ibonisa ukuba i-Ether ikwisantya esiphezulu. Abathengi bavela kummandla othengiswe kakhulu ukunyusela amaxabiso phezulu.
Kwitshathi yeeyure ezi-4, i-ETH/USD ikwindlela esecaleni njengoko imfuno kunye nonikezelo lufikelela kwi-equilibrium. Kwiiveki ezimbini ezidlulileyo, i-altcoin enkulu kunazo zonke ziye zahamba phakathi kweedola ze-3,000 kunye ne-$ 3,400 yamanqanaba exabiso. Umrhwebi ojongene noluhlu unokulandela umkhondo wecala kwaye aqalise imiyalelo ehambelanayo. Okwangoku, i-Ether irhweba ngexabiso eliphantsi. Umrhwebi kufuneka aqalise umyalelo omde kwinqanaba lenkxaso kwaye aphume umyalelo kwindawo yokumelana. Ngokufanayo, ukuba i-Ether ijongene nokugatywa kwinqanaba lokumelana, i-short-order kufuneka iqaliswe kwaye uphume umyalelo kwinqanaba lokuxhasa.
ETH / USD - 4 Itshathi yeYure
Unokuthenga iingqekembe ze-crypto apha. Thenga amathokheni
Phawula: U-Learn2.Trade akangomcebisi wezezimali. Yenza uphando lwakho ngaphambi kokuba utyale imali yakho kuyo nayiphi na iasethi eyimali okanye imveliso ebekiweyo okanye umsitho. Asinaxanduva lotyalo-mali lwakho
I-akhawunti yeMakethi yeMoneta yeNgxowa-mali enobuncinci be- $ 250
Khetha ukusebenzisa le fomu ukubanga i-50% yebhonasi yakho yediphozithi
$250 Idiphozithi encinci
I-20% yamkelekile ibhonasi ye- $ 10,000
Ubuncinci bediphozithi $ 100
Qinisekisa iakhawunti yakho ngaphambi kokuba kufakwe ibhonasi
$100 Idiphozithi encinci
Amaxabiso aphantsi okuThengisa
50% Ibhonasi yeMkeleki
Ukuphumelela amabhaso Inkxaso yeyure ezingama-24
$200 Idiphozithi encinci
Iqonga lokurhweba nge-Cryptocurrency yokuwonga amabhaso
Ii-Cryptoassets ezili-14 ezikhoyo zokutyala imali
I-FCA kunye neCysec zilawulwa
Iimveliso zotyalomali ezingalawulekiyo kakhulu. Akukho khuseleko lwabatyali zimali kwi-EU.
Ngaphezulu kwe-100 yemveliso eyahlukeneyo yezemali
Gcina imali encinci njenge- $ 10
Ukurhoxiswa kwemini enye kunokwenzeka
I-Cryptos ephezulu yezorhwebo efana neBitcoin, iLitecoin kunye ne-Ethereum kunye nokunye
Iikomishini zeZero kwaye akukho ntlawulo zebhanki kwintengiselwano
Ukujikeleza inkonzo yewotshi ngenkxaso kwiilwimi ezili-14
$ 100 idiphozithi encinci,
U-Azeez Mustapha yingcali kwezorhwebo, umhlalutyi wemali, umhleli weempawu, kunye nomphathi wezezimali ngaphezulu kweminyaka elishumi yamava kwicandelo lezemali. Njengombhali webhlog kunye nombhali wezemali, unceda abatyali mali baqonde iikhonsepthi ezintsonkothileyo zemali, ukuphucula izakhono zabo zotyalo-mali, kunye nokufunda ukulawula imali yabo.
Jonga zonke izithuba ngu-Azeez Mustapha
tags ETH, ETH / USD, Ethereum, Uhlalutyo lwamaxabiso
I-Ethereum ikwi-Uptrend, ayibonisi Mandla ngaphantsi kwe-3,400 yeedola
Ukuhlaziywa: 17 January 2022
I-Ethereum iguquguquka ngaphantsi kwe-$ 3,020 kunye ne-$ 3,400
I-ETH / i-USD ekujoliswe kuyo kwinqanaba le-$ 3,848
Ixabiso langoku: $ 3,255.15
Intengo yeNtengiso: $ 387,988,544,870
Umthamo wokuThengisa: $ 10,598,043,447
Uhlalutyo lwamaxabiso e-Ethereum (ETH) ngoJanuwari 16, 2021
I-Ethereum (i-ETH) ixabiso kwi ukulungiswa ezantsi njengoko ibonisa akukho amandla ngezantsi $3,400.Altcoin iyaguquguquka phakathi $3,020 yaye $3,400. Ukususela ngoJanuwari 12, ixabiso lika-Ether lilungiswe phezulu kodwa lachaswa kwi-$ 3,400 ephezulu. I-altcoin yehla yaya kutsho kwi-3,100 yeedola ephantsi kwaye yaqalisa intshukumo emacaleni ngezantsi kophezulu. I-ETH / USD yayiza kuhlawulela kwi-$ 3,800 ukuba inqanaba lokumelana liphulwa. Ngaphandle koko, ukuqhawuka ngaphezulu kwe-3,800 yeedola eziphezulu kuya kukhupha i-Etere ngaphandle kokulungiswa okuhla. Nangona kunjalo, i-altcoin enkulu ibeka ingozi ekunciphiseni kwi-3,000 yenkxaso ye-XNUMX ukuba iinkunzi zeenkomo zihluleka ukuphula i-high yamva nje.
I-Ether ikwinqanaba le-46 ye-Relative Strength Index kwixesha le-14. Ibonisa ukuba i-Ether isekho kwindawo ye-downtrend njengoko iguquguquka phakathi kwe-$ 3,020 kunye ne-3,400 yeedola. Ixabiso le-crypto lingaphantsi kwee-avareji ezihambayo ezibonisa ukuhla kwamaxabiso. Umyinge weentsuku ezingama-21 ohambahambayo usebenza njengochaso. I-Ether ingaphantsi kwe-20% yoluhlu lwe-stochastic yemihla ngemihla. Ibonisa ukuba i-Ether ikwindawo ethengisiweyo. Abathengi kulindeleke ukuba bavele kummandla othengisiweyo ukunyusela amaxabiso phezulu.
Kwitshathi yeeyure ze-4, i-ETH / USD ikwi-uptrend kodwa ukunyuka okuphezulu kuye kwapheliswa njengoko kungabonakali amandla angaphantsi kwe-3,400 yeedola. Abathengi bakufumanisa kunzima ukwaphula ngaphezulu kwe-3,400 yokuxhathisa. I-uptrend iya kuphinda iqalise xa ukuchasana kuphulwa. Okwangoku, ngoDisemba 12 uptrend; umzimba wekhandlela ofunyenweyo uvavanye i-50% yenqanaba lokubuyisela iFibonacci. Ukubuyisela kubonisa ukuba i-Ether iya kunyuka kwinqanaba le-2.0 yezandiso zeFibonacci okanye i-$ 3,848.36.
USolana ukudiliza i-Ethereum Kungekudala: Umhlalutyi weBofA
Ukuhlaziywa: 16 January 2022
Umhlalutyi weBhanki yaseMelika (i-BofA) u-Alkesh Shah usanda kupapasha uphando malunga ne-cryptocurrency, eyaphakamisa ingxabano yokuba uSolana (SOL) unokuthatha isabelo semarike esingaphezulu kwi-Ethereum njengoko ixesha lihamba.
Kwisifundo sakhe, u-Shah waphawula ukuba uSolana "Ivelisa i-blockchain elungiselelwe iimeko zokusetyenziswa kwabathengi ngokubeka phambili i-scalability, imirhumo ephantsi yentengiselwano, kunye nokulula ukusetyenziswa," ubhekisa kwilungu leSolana Foundation uLily Liu.
Umhlalutyi waqaphela ukuba iimpawu ezifana nokusebenziseka kwayo ngokulula kunye neendleko eziphantsi zenza ukuba i-SOL igqibelele kwi-micropayment, imidlalo, kunye namathokheni angabonakaliyo (NFTs). Ukuqhayisa ngaphezulu kwe-50 yeebhiliyoni zentengiselwano ezilungisiweyo ukusukela oko yasungulwa ngo-Matshi ka-2020 kunye ne-10 leebhiliyoni zeedola kwixabiso lilonke elitshixiweyo (i-TVL), u-Shah uthe:
"USolana unokuba yiVisa ye-asethi yedijithali."
Nge-capitalisation ye-market over $ 46.7 yezigidigidi (idatha yexesha lokushicilela), uSolana okwangoku ubambe indawo yesihlanu kwi-crypto rankings enkulu. Okubangel 'umdla kukuba, i-Ethereum, i-cryptocurrency yesibini ngobukhulu, okwangoku iqhayisa nge-capitalisation engaphezu kwe-397 yeebhiliyoni zeedola, ngokutsho kweCoinMarketCap.
I-Solana ilawula i-Crypto Industry nge-Speed ​​​​Transaction
UShah waqinisekisa ukuba umahluko kaSolana kwi-Ethereum ngu "ukubonisa impumelelo," ukongeza ukuba umahluko wemali enkulu udala ithuba lokuba Solana. Icaphula indlela yayo yokuvumelana yobungqina bembali, umhlalutyi weBhanki yaseMelika wathi:
"Obu buchule buvumela ukusetyenzwa kweshishini elikhokelayo ~ 65,000 intengiselwano ngesekhondi kunye nomndilili womrhumo wentengiselwano we-0.00025 yeedola ngelixa uhlala uphakathi kwaye ukhuselekile."
U-Shah uchazwe kwinqaku lakhe ukuba i-blockchain ye-Ethereum ibeka phambili ukugqithiswa kunye nokhuseleko kwindleko ye-scalability, yongeza ukuba iingxaki ze-scalability zenethiwekhi zihlala zikhokelela ekuxinaniseni kwenethiwekhi kunye neentlawulo ze-ultra-high.
Ukuchaza ukuba ezinye iibhloko ezinobungozi, ezifana noSolana, ziza kuxhamla kobu buthathaka kwaye ngokuthe ngcembe zibange isabelo semarike ye-Ethereum, u-Shah wathi:
"Ukubekwa phambili kuka-Ethereum kunokuwenza ukuba asebenze ngexabiso eliphezulu kunye nesazisi, ukugcinwa kunye namatyala okusetyenziswa kwekhonkco."
Ngeli xesha, i-behemoth crypto exchange Coinbase isanda kuqinisekisa ukuba "I-ETH scalability iya kuphucuka." Yongeza i-caveat leyo "Njengoko sisamkela ikhulu lezigidi zabasebenzisi kwi-crypto kunye neWeb3, imiceli mngeni ye-ETH inokukhula."
Unokuthenga iingqekembe ze-crypto apha: Thenga ivezwa
tags I-Bhanki yaseMelika (BofA), Cryptocurrency, Ethereum, iindaba, Solana
Uqikelelo loNyaka lwe-Ethereum (ETH), ngo-2022
Ukuhlaziywa: 13 January 2022
ixabiso Ethereum Ixesha elide Uhlalutyo: Bearish
Ixabiso le-Ethereum (ETH) ikwisilungiso esisezantsi njengoko ixabiso lifumana inkxaso ngaphezu komgca we-50 weentsuku ezihambayo. Namhlanje, i-altcoin enkulu yenza ukunyuka okuphezulu. Ukubuyela emva, ekuqalisweni kwayo kokuqala, i-Ethereum ifumene ixabiso eliphakamileyo le-1,424 yeedola ngoJanuwari 2018. Emva kokufikelela kwixabiso eliphezulu, ukunyuka kwagqitywa njengoko imarike yafikelela kummandla ogqithiseleyo. U-Ether wenqabile ukuya kwinkxaso ye-100 yeedola kwaye waqala ngokutsha ukunyusa okutsha. NgoJanuwari 2021, ukuchasana kwe-overhead kwi-$ 1,424 kwaphulwa njengoko i-altcoin ifikelele kwi-4,864 yeedola. Namhlanje, imarike iyancipha ngenxa yokuba iinkunzi zenkomo aziphumelelanga ukuphuka ngaphezu kwe-4,400 ye-overhead resistance. Ukuchaswa kwe-overhead yinqanaba lexabiso lembali ngoMeyi 10, 2021. I-Ethereum ibuyele kwaye ifumene inkxaso engaphezulu kwe-3000 yenkxaso.
ETH / USD-Itshathi yenyanga
Kwitshathi yeveki, i-Ether ingaphantsi kwe-20% uluhlu lwe-stochastic yemihla ngemihla. I-altcoin ifikelele kummandla ogqithisiweyo wemarike. Kuthetha ukuba uxinzelelo lokuthengisa lunokuphela. Abathengi sele bevelile ukutyhala i-altcoin kwiindawo eziphakamileyo zangaphambili. Nangona kunjalo, kwitshathi yenyanga, i-Ethereum ikwinqanaba le-63 ye-Relative Strength Index kwixesha le-14. I-altcoin ikwindawo ye-bullish yendawo kwaye iyakwazi ukunyuka phezulu.
I-Ethereum (ETH) Ixesha eliPhakathi iTrendi: Bullish
Kwitshathi yenyanga, i-Ethereum ikwi-uptrend njengoko imivalo yexabiso ingaphezulu kwemiyinge ehambayo. Okwangoku, ngoNovemba 1 uptrend, i-candle body retraceed yavavanya i-61.8% ye-Fibonacci ye-retracement level. Ukubuyisela kwakhona kubonisa ukuba i-Ether iya kunyuka kwinqanaba le-1.618 isandiso seFibonacci okanye i-$ 7,844.60.
Yiyiphi iNtshukumo elandelayo ye-Ethereum (ETH)?
U-Ethereum uqalise ukuqaliswa kokunyuka kokunyuka emva kokufumana inkxaso ngaphezu komgca we-50 weentsuku ezihambayo. I-altcoin enkulu ifunyenwe ngaphezu kwe-3,000 yenkxaso ye-$. Ngokutsho kohlalutyo lwesixhobo seFibonacci, kulo nyaka, i-Ether iya kufikelela kwi-$ 7,844 ephezulu.
ETH / USD-Itshathi yeveki
I-Ethereum iwa ngokuphawulekayo ngaphezu kwe-3,000 yeedola, ingabamba ngaphezu kwayo
Ukuhlaziywa: 9 January 2022
I-Ethereum iyancipha ukuya kwi-3,099 yeedola
Inkxaso ebalulekileyo inokubamba
Ixabiso langoku: $ 3,094.63
Intengo yeNtengiso: $ 368,537,673,177
Umthamo wokuThengisa: $ 16,229,192,866
Uhlalutyo lwamaxabiso e-Ethereum (ETH) ngoJanuwari 9, 2021
Iimali ze-Ethereum (ETH) ixabiso liqalise kwakhona ukuthengisa uxinzelelo ukuya kwi-$ 3,000 kodwa inokubamba ngaphezu kwayo . Namhlanje, i-altcoin enkulu inqabile ukuya kwi-3,093 yeedola. Imarike iphinda iphinda i-26 ka-Agasti, inqanaba lexabiso lembali. Uxinzelelo lokuthengisa lunokuphela ukuba inkxaso ye-3,000 yeedola ibambe. Nangona kunjalo, ukuba iibhere ziphule ngaphantsi kwenkxaso ye-3,000 yeedola, imarike iya kuncipha ngakumbi ukuya kwi-2,656 yeedola.
Ukuhla kwakutshanje kuye kwaqhubela i-Ether kwinqanaba le-27 ye-Relative Strength Index kwixesha le-14. Ibonisa ukuba i-Ether iwele kwindawo ethengiswa kakhulu kwimarike. Oku kuthetha ukuba uxinzelelo lokuthengisa lunokuphela njengoko abathengi bevela kwindawo ethengiswa kakhulu. Ixabiso le-crypto lingaphantsi kwee-avareji ezihambayo ezibonisa ukuba i-Ether iyakwazi ukuhla ngakumbi. I-Ether ine-bearish crossover. Oko kukuthi, i-SMA yeentsuku ze-21 iwela ngaphantsi kwe-50-day SMA ebonisa umyalelo wokuthengisa. I-Ether ingaphantsi kwe-20% yoluhlu lwe-stochastic yemihla ngemihla. Oku kubonisa kwakhona ukuba i-Ether iwele kummandla othengisiweyo weemarike.
I-ETH/USD iye yawa kakhulu ngaphezu kwe-3,000 yenkxaso kodwa inokubamba ngaphezu kwayo. Ukwaphulwa kwe-3,000 yeedola kuya kukhokelela kuxinzelelo oluthe kratya lokuthengisa. Okwangoku, ngoDisemba 15 downtrend; umzimba wekhandlela ofunyenweyo uvavanye i-50% yenqanaba lokubuyisela iFibonacci. Ukubuyisela kwakhona kubonisa ukuba i-Ether iya kuwela kwinqanaba le-2.0 yezandiso zeFibonacci okanye i-$ 2,703.
I-Ethereum (ETH) i-Ether ijongene nokulahlwa kwi-$ 3,800 ephezulu, iphinda iqalise ukuthengisa uxinzelelo.
Ukuhlaziywa: 6 January 2022
I-Ethereum iyancipha ukuya kwi-3,436 yeedola
I-Ether iphinda iqalise ukuthengisa uxinzelelo
Ixabiso langoku: $ 3,460.70
Intengo yeNtengiso: $ 411,968,284,291
Umthamo wokuThengisa: $ 20,429,496,320
Uhlalutyo lwamaxabiso e-Ethereum (ETH) ngoJanuwari 5, 2021
I-Ethereum (i-ETH) ixabiso liyehla kwaye liqalise kwakhona ukuthengisa uxinzelelo. Iibhere zijongene nokukhatywa kwi-3,800 yeedola ukuze ziphinde ziqalise ukuthengisa uxinzelelo. Ukususela kwi-downtrend ngoNovemba 9, ixabiso lika-Ether liye lenza uluhlu oluphezulu kunye nezantsi. Namhlanje, imarike iwile phantsi kwe-3,534 yeedola. Imarike kulindeleke ukuba yenze enye ephantsi ephantsi kwe-3,270 yeedola. I-Ether iya kuphinda ibuyele kwi-low yangaphambili ye-3,436 yeedola. I-altcoin enkulu iya kuncipha ngakumbi ukuba iphula ngaphantsi kwe-3,436 yeedola.
Ixabiso le-Ether lingaphantsi kwee-avareji ezihambayo ezibonisa ukuba i-altcoin iya kuncipha ngakumbi. Ngenxa yokuhla kutshanje, i-Ethereum ikwinqanaba le-34 ye-Relative Strength Index kwixesha le-14. Imarike isondela kummandla ogqithisiweyo wemarike. I-ETH / USD iwele ngaphantsi kwe-20% uluhlu lwe-stochastic yemihla ngemihla. Uxinzelelo lokuthengisa luya kuphela kungekudala.
I-ETH / USD iphinde yaqala ukuthengisa uxinzelelo emva kokugatywa kwi-3,800 yeedola eziphezulu. Okwangoku, ngoDisemba 30 downtrend; umzimba wekhandlela ofunyenweyo uvavanye inqanaba le-61.8% lokubuyisela iFibonacci. Ukubuyisela kubonisa ukuba i-Ether iya kuwela kwinqanaba le-1.618 i-Fibonacci extensions okanye i-$ 3,270.77.
U-Ethereum ujongene nokuRsejelwa kwi-3,850 yeedola, ngoMeyi uHlaziya kwakhona i-$ 3,452 ephantsi
Ukuhlaziywa: 3 January 2022
U-Ethereum uwela kwi-3,606 yeedola
I-Ether ijongene nokugatywa kwi-3,850 yeedola eziphezulu
Ixabiso langoku: $ 3,795.73
Intengo yeNtengiso: $ 452,343,118,854
Umthamo wokuThengisa: $ 10,046,065,017
I-Ethereum (ETH) Ixabiso nge-2 kaJanuwari 2022
Ixabiso le-Ethereum (ETH) ikwi-downtrend kwaye inokuphinda ijonge i-$3,452 ephantsi. Ukususela ngoNovemba 9 ukukhatywa kwexabiso, imarike iqhubekile nokuhla. Ixabiso lika-Ether liye laqhubeka lenza uluhlu oluphantsi oluphezulu kunye nezantsi njengoko i-altcoin ifikelele kwi-3,606 yeedola. Kwinkxaso yangoku, iinkunzi zenkomo zithenge iidiphu njengoko ixabiso liqhubeka nokunyuka. I-uptrend yangoku inokuthi ijongane nokuchasana kwinqanaba lexabiso le-3,850 yeedola. Nangona kunjalo, i-downtrend iya kuphinda iqalise ukuba i-altcoin ijongene nokugatywa kwi-3,850 yeedola eziphezulu.
Imivalo yexabiso lika-Ether ingaphantsi kwe-21-day line SMA kunye ne-50-day line SMA ebonisa ukuwa okunokwenzeka kwe-altcoin. I-Ether iyawa ngoku kwi-3,850 yokuchasana. I-Ether ikwinqanaba le-43 ye-Relative Strength Index kwixesha le-14. I-altcoin ithengisa kwindawo ye-downtrend kwaye ingawa.
I-altcoin enkulu ingaphantsi kwe-50% yendawo ye-stochastic yemihla ngemihla. Imarike ikwimo ye-bearish.
I-altcoin enkulu kunazo zonke iwela phantsi kwaye inokuphinda ibuyele kwi-3,452 yeedola eziphantsi. Okwangoku, ijongene nokukhatywa kwi-3,850 yeedola eziphezulu. Okwangoku, ngoNovemba 18 downtrend; umzimba wekhandlela ofunyenweyo uvavanye inqanaba le-61.8% lokubuyisela iFibonacci. Ukubuyiselwa kwakhona kubonisa ukuba i-Ether iya kuwela kwinqanaba le-1.618 i-Fibonacci izandiso okanye i-$ 3,452 inqanaba lexabiso. Ukususela kwisenzo sexabiso, u-Ether ufikelele kwi-3,606 yeedola kwaye wenze ukulungiswa okuphezulu.
U-Ethereum ulahlekelwa yi-$4,000 yeNqanaba leNgcaciso yeNgqondo, iNqanaba ekujoliswe kulo i-$ 3,486 ephantsi
Ukuhlaziywa: 30 Disemba 2021
I-Ethereum ilahlekelwa yinkxaso ye-$ 4,000
I-altcoin enkulu ekujoliswe kuyo kwinqanaba le-3,486 ephantsi
Ixabiso langoku: $ 3,670.24
Intengo yeNtengiso: $ 436,567,256,298
Umthamo wokuThengisa: $ 44,577,725,594
Uhlalutyo lwamaxabiso e-Ethereum (ETH) ngo-Disemba 29, 2021
Ethereum (ETH) pirayisi iyaqhubeka nokuhla kwayo emva kokulahlekelwa yi-$ 4,000 yexabiso lexabiso leengqondo kodwa inqanaba elijoliswe kwi-$ 3,486 eliphantsi. NgoDisemba 27, i-altcoin enkulu ijongene nokugatywa kwi-4,100 yeedola emva kokuba abathengi behlulekile ukugcina ixabiso elingaphezu kwe-$ 4,000 ephezulu. U-Etere wenqabile ukuya ngaphantsi kwe-3,736.10 yeedola ngexesha lokushicilela. I-altcoin enkulu isondela kwi-low yangaphambili kwi-3,710 yeedola. I-Ethereum iya kuncipha ngakumbi ukuba i-low yangaphambili iphulwa. Imakethi iya kuhla ukuya kwi-low yamva nje kwi-3,436 yeedola.
Ukuhla kwakutshanje kwe-altcoin kuqhube i-Ether kwinqanaba le-39 ye-Relative Strength Index kwixesha le-14. I-Ether iyawa kwaye isondela kummandla ogqithisiweyo wemarike. Imivalo yexabiso lika-Ether ingaphantsi kwe-21-day line SMA kunye ne-50-day line SMA ebonisa ukuwa okunokwenzeka kwe-altcoin. I-altcoin enkulu ingaphantsi kwe-50% yendawo ye-stochastic yemihla ngemihla. Imarike ikwimo ye-bearish.
U-Ethereum uphinde waqala ukuhla emva kokukhatywa kwangoku kwi-4,100 yeedola eziphezulu kodwa ekujoliswe kuyo kwinqanaba le-3,486 ephantsi. Okwangoku, ngoDisemba 10 downtrend; umzimba wekhandlela ofunyenweyo uvavanye inqanaba le-61.8% lokubuyisela iFibonacci. Ukubuyiselwa kwakhona kubonisa ukuba i-Ether iya kuwela kwinqanaba le-1.618 isandiso seFibonacci okanye i-$ 3,486 inqanaba lexabiso.
I-Ethereum ibuyisela i-Rebounds Ngaphezu kwe-4,000 yeedola, Inyuka ngokuPhambili
Ukuhlaziywa: 27 Disemba 2021
I-Ethereum idibanisa ngaphezu kwenkxaso ye-4,000 yeedola
I-altcoin enkulu ekujoliswe kuyo kwinqanaba le-$ 4,407
Ixabiso langoku: $ 4,071.70
Intengo yeNtengiso: $ 484,153,366,999
Umthamo wokuThengisa: $ 9,651,754,787
Uhlalutyo lwamaxabiso e-Ethereum (ETH) ngo-Disemba 26, 2021
Ethereum isekwisilungiso esisezantsi kodwa inyukela kancinci phezulu. Ixabiso lika-Ether liqhekeza ngaphezu komgca we-21 weentsuku ezihambayo. Idibanisa ngaphezu kwe-4,000 yenkxaso ye-$ malunga nokunyuka okunokwenzeka. Ukuba abathengi batyhala i-altcoin enkulu ngaphezu komgca we-50 weentsuku ezihambayo, i-crypto iya kuphinda iqalise ukunyuka. Imakethi iya kuphakama ukuze iphinde ibuyele kwiindawo eziphezulu zangaphambili ze-4,400 kunye ne-$ 4,800. Ngokwahlukileyo, ukuba i-Ether iphakama kwaye ijongene nokugatywa kwi-avareji ye-50 yomgca wokuhamba, ingqekembe iya kunyanzeliswa kwi-range-bound boundary move. Ixabiso le-Ether liya kuguquguquka phakathi kwee-avareji ezimbini ezihambayo.
I-Ether ikwinqanaba le-49 ye-Relative Strength Index kwixesha le-14. Ibonisa ukuba kukho ukulingana phakathi kokubonelela kunye nemfuno.
Imivalo yexabiso lika-Ether iyaguquguquka ngaphezu kwe-21 yomgca we-SMA kodwa ingaphantsi komgca we-50 weentsuku ze-SMA ezibonisa ukuhamba-hamba. I-altcoin enkulu ingaphezulu kwe-40% yendawo ye-stochastic yemihla ngemihla. Isantya se-bullish azinzanga.
I-Ethereum irhweba ngokuthe tye kodwa inyuka kancinci ukuya phezulu. Isenzo sexabiso sibonakaliswa ngamakhandlela amancinci omzimba. Le ntshukumo yexabiso langoku iya kuba kwi-range-bound move. I-altcoin enkulu ijongene nokugatywa kwizinga lexabiso le-4,154 yeedola. I-uptrend iya kuphinda iqalise ukuba iphezulu yamva nje yaphulwa. Okwangoku, ngoDisemba 23 uptrend; umzimba wekhandlela ofunyenweyo uvavanye i-50% yenqanaba lokubuyisela iFibonacci. Ukubuyisela kubonisa ukuba i-Ether iya kunyuka kwinqanaba le-2.0 yezandiso zeFibonacci okanye i-$ 4,407 inqanaba lexabiso.
I-Ethereum idibanisa ngaphezu kwe-3,800 yeedola, ayikwazi ukugcina ngaphezu kwe-$4,076
Ukuhlaziywa: 22 Disemba 2021
U-Ethereum ujongene nokwaliwa kwi-4076 XNUMX yeedola
I-altcoin enkulu kunazo zonke isendleleni yokuhamba
Ixabiso langoku: $ 3,996.69
Intengo yeNtengiso: $ 474,986,682,766
Umthamo wokuThengisa: $ 13,969,787,417
Uhlalutyo lwamaxabiso e-Ethereum (ETH) ngo-Disemba 22, 2021
Ukususela ngoDisemba 17, ipateni bearish ye Ethereum yaphazamiseka njengoko ibingakwazi ukugcina ngaphezulu kwe-4,076 yeedola. Ekuqaleni, ixabiso lika-Ether lalisenza uchungechunge oluphezulu kunye nezantsi. NgoDisemba 17, ixabiso le-ETH lalihamba ecaleni. Okwangoku, ixabiso lika-Ether lijongene nokukhatywa kwi-21-day SMA. Imarike iya kuncipha ukuya kwicala elisezantsi ukuba ijongene nokukhatywa kwinqanaba eliphezulu lamva nje. Ngakolunye uhlangothi, ukuba iinkunzi zeenkomo ziphule ngaphezu kwee-avareji ezihambayo, i-altcoin iya kuphinda iqalise i-uptrend. I-Ether iya kuphinda ibuyele kwi-highs yangaphambili ye-4,800 yeedola.
I-Ether ikhuphuke kwinqanaba le-45 ye-Relative Strength Index kwixesha le-14. Oku kungenxa yokuba ixabiso lika-Ether lilungiswe ukuya kwi-4,076 yeedola eziphezulu. Okwangoku ijongene nokukhatywa kwinqanaba eliphezulu lakutshanje. I-RSI iya kulahla ukuba i-crypto iyancipha. I-altcoin enkulu ingaphantsi kwe-50% yendawo ye-stochastic yemihla ngemihla. Isantya se-bearish asizinzanga. Iibhanti zesitochastiki zemihla ngemihla zityibilika ngokuthe tye ebonisa ukushukuma kwamacala.
I-Ethereum ikwinyathelo elihlayo njengoko ingazange ikwazi ukugcina ngaphezulu kwe-4,076 yeedola. Okwangoku, i-Ether ikwindlela esecaleni. I-Ether ijongene nokukhatywa kwinqanaba eliphezulu lamva nje. Okwangoku, ngoDisemba 6 downtrend; umzimba wekhandlela ofunyenweyo uvavanye i-50% yenqanaba lokubuyisela iFibonacci. Ukubuyisela kwakhona kubonisa ukuba i-Ether iya kuwela kwinqanaba le-2.0 yezandiso zeFibonacci okanye i-$ 3,161.56.
← Entsha izithuba1 2 ... 19 abaDala izithuba →
Iimpawu ezibalaseleyo ze Forex 2021
Indlela yokusebenzisa iiMpawu ze-Forex
Ikhosi yeNtengiso ye Forex
Amanqanaba aphilileyo e-Forex kunye neetshathi
Iimpawu zeTelegram zeTekisi
Isikhokelo sabarhwebi be Forex
Ungayikhetha njani iBroker
Iimpawu zeCrypto Signals
Funda 2 Urhwebo ligama lokurhweba leGajethi Geek Online Ltd
IOfisi 1/2373, iNqanaba G, iNdlu yeQuantum, i-75 Abate Rigord Street, Ta 'Xbiex, XBX 1120, Malta
Inombolo yeNkampani ebhalisiweyo: 11746374
Ulwazi olukuwebhusayithi yeLearn2.trade nangaphakathi kweQela leTelegram lenzelwe iinjongo zemfundo kwaye akufuneki luthathwe njengeengcebiso zotyalo mali. Ukurhweba kwiimarike zezemali kuthwala inqanaba eliphezulu lomngcipheko kwaye akunakulunga kubo bonke abatyali mali. Ngaphambi kokurhweba, kuya kufuneka uthathele ingqalelo ngononophelo iinjongo zakho zotyalo-mali, amava kunye nomngcipheko wokutya. Kukurhweba kuphela ngemali olungele ukuphulukana nayo. Njengalo naluphi na utyalo-mali, kunokwenzeka ukuba unokugcina ilahleko ezithile okanye zonke zotyalo-mali lwakho ngelixa uthengisa. Kuya kufuneka ufune iingcebiso ezizimeleyo ngaphambi kokurhweba ukuba unamathandabuzo. Ukusebenza kwangaphambili kwiimarike ayisosalathiso esithembekileyo sokusebenza kwexesha elizayo.
I-Learn2.trade ayithathi xanduva kwilahleko eyenziweyo ngenxa yomxholo obonelelwe ngaphakathi kumaQela eTelegram. Ngokusayina njengelungu uyavuma ukuba asiboneleli ngcebiso ngezemali kwaye wenza isigqibo kubarhwebi obafaka kwiimarike. Asinalo ulwazi ngenqanaba lemali othengisa ngalo okanye inqanaba lomngcipheko owenzayo ngorhwebo ngalunye.
Indawo yokufunda yeLearn2.trade isebenzisa iicookies ukuze ikunike olona lwazi lubalaseleyo. Ngokundwendwela iwebhusayithi yethu kunye nesikhangeli sakho esenzelwe ukuvumela ii-cookies, okanye ngokwamkela Umgaqo-nkqubo weKuki ukuba uyavuma umgaqo-nkqubo wethu wabucala, oneenkcukacha ngomgaqo-nkqubo weKuki.
Ilungelo lokushicilela © 2021 Funda ngoRhwebo olu-2